Ogaden News Agency (ONA) – shir ay madaxda JWXO ku qabateen Magaalada London
shir ay madaxda JWXO ku qabateen Magaalada London
Magaalada London waxaa shir aad u weyn ku qabtay madaxda Jabhada Wadniga Xoreynta Ogadeniya oo ay kamid ahaayeen Hoggaanka Arrimaha Dibada ONLF Cabdi Raxmaan Mahdi iyo Hoggaanka Arrimaha Abaabulka Iyo Bulshada Maxamed Cabdi Yasiin Diirane.
Madaxda ayaa ka hadashay Marxalada maanta uu marayo Halganka Shacabka somalida Ogadeniya, Wadahadalka Ururka ONLF iyo Ethiopia u furmay
Sidoo kale waxaa madaxdu aad uga hadashay shaqooyinka Ururka ee ku aadan ururada bulshada Somalida Ogadeniya qeybaheeda kala gadisan iyo qaabkay halganka u xoojin lahaayeen.
Shirkan oo dhamaan xubnaha Jaaliyada kasoo qeyb galeen ayaa su’alo wax tar leh iyo afkaaro badan ayaa shacabki iyana kasoo jeediyeen kulankan.
Shirkan ayaa aad looga soodhaweeyay magaalada London kuna soo beegmay waqti jaaliyada London ay olole aad u xoog badan ka wado London oo kamid ah meelaha dadka ugu badan ee kasoo jeeda Ogadeniya ay ku nool yihiin. London ayaa sido kale ah xarunta halganka shacabka Somalida Ogadeniya ka dab qaato ee iftiinka qadiyada Ogadeniya.
Kadib markii la dhagaysatay Qudbadihii madaxda shacabkiina ay siiyeen waxi talo iyo tusaale ah ayaa madaxdi si sharaf leh loo sogootiyay waxaana isku soo hadhay Jaaliyada Ogadeniya ee london iyo masuliyiinta Jaaliyada oo iyana halkas ka warbixiyay howlaha u yaala jaaliyada. iyo shaqooyinki ay jaaliyado saddexdi bilood ee u danbaysay qabatay.
Waxaa kale oo shirkan Jaaliyadu isugu timid lagu canbaareeyay xasuuqa Shacabka ee kasocda Ogadeniya ee u danbeeyay xasuuq wadareedkii gobolka Doolo haweenka badan iyo caruurta lagu xasuuqay.
Waxaa shirkan loogu mahad naqay Warbaahinta Wadanka Sweden ee soo bandhigtay xaalada Shacabka Somalida Ogadeniya iyaga oo ka run sheegay gumaadka iyo xasuuqa lagu hayo shacabka Ogadeniya.
Waxaa shirkan lagu so dhaweeyay wada hadalka Ururka ONLF iyo Ethiopia uga furmay Kenya. Iyada oo tusaale badana laga bixiyay cadowtinimada Gumeysiga Ethiopia.
Kulamo badan oo noocan oo kale ah ayaa Jaaliyadu ku qaban doonta Magaalada London.